musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Avianca Holdings iri kutsvaga 1.2 mabhiriyoni emadhora
Airlines • Colombia Breaking News • nhau • kutakura • Akasiyana Nhau
Avianca Holdings ikambani yeLatin America inobata ndege yakaumbwa muna Kukadzi 2010 nekubatanidzwa kwendege mbiri, Avianca yekuColombia neTACA Airlines kubva kuEl Salvador.
Avianca Holdings yatsanangudza nhasi mari yadzo inodiwa-chikwereti (DIP), umo ine chinangwa chekusimudza madhora anokwana mabhiriyoni maviri emadhora mumadhorobha matsva uye kuwedzera chikamu chayo muchirongwa cheLifeMiles chekuvimbika.
Ndege yakabata yakati yasvika pazvibvumirano zvine mamiriro nemapato akasiyana kuti vape mari pachirongwa ichi icho chinoda zvidimbu zviviri zvinosvika madhora mazana mapfumbamwe emadhora uye mazana matatu emadhora zviuru mazana matatu neshanu zvakateerana.
Mutero wekutanga waizosanganisira kuburitswa kwemadhora mazana maviri nemakumi maviri emadhora muzvibvumirano zviripo, pamwe neUS $ 220 miriyoni yechikwereti chakapihwa Advent, LifeMiles '168.5% wemugovani. Mukudzoserwa kwechikamu chechikwereti uye imwezve USD30 miriyoni mumari, Avianca Holdings inoronga kuwana 26.5% ​​share kubva kuAdvent nesarudzo yekutenga yasara 19.9% mune ramangwana. Iri boka rinotodzora 10.1% yeLifeMiles.
Verenga chinyorwa chose paCH Aviation: